बैंक क्रेडिट ग्रोथ के हो ? यसको गिरावटले बैंकमा कस्तो असर पार्छ ? ~ Banking Khabar
बैंक क्रेडिट ग्रोथ के हो ? यसको गिरावटले बैंकमा कस्तो असर पार्छ ?
सदैव रेमिट्यान्सले धान्ने छैन ! अति भयो- अर्थतन्त्र सुधार्न केही त सोँचौं